Njehie isii ị na - eme, ma ị gaghị eme ya, iji ngwaọrụ gam akporo gị | Akụkọ akụrụngwa
Ọtụtụ ndị ọrụ na-enwe ọfụma na ekwentị mkpanaaka ma ọ bụ mbadamba nwere sistemụ arụmọrụ gam akporo yana n'agbanyeghị eziokwu ahụ na ọtụtụ n'ime ha maara otu esi ejikwa ha na nnukwu udo, ọtụtụ na-eme ụfọdụ mmejọ ndị ekwesighi ime. Ọ dịghị onye na-akọwa anyị otu esi eji smartphone ma ọ bụ mbadamba ma anyị na-amụ ihe mgbe niile dabere na ihe anyị gụrụ na netwọk nke netwọkụ ma ọ bụ ihe enyi ma ọ bụ onye ikwu gị gwara anyị.
Taa, anyị agaghị egosiputa gị ọrụ gam akporo ọhụụ ọ bụla, mana anyị ga-elekwasị anya na imeghe anya gị ma mee ka ị hụ 6 emehie ihe ị na-na-na-na-na-na anyị ekwesịghị ime na anyị gam akporo ngwaọrụ. Burukwa n’uche na agbanyeghị na ị gaghị ekwenye na ya, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ njehie niile anyị ga-enyocha ugbu a ka emechara, ụfọdụ n’ime ha n’amataghị ya.
Ọ bụrụ na ịchọghị imehie na ngwaọrụ gị na sistemụ arụmọrụ gam akporo, lelee ihe anyị ga-agwa gị, n'ezie ọrụ na arụmọrụ nke ọnụ gị ga-aka mma. Dị ka nkwanye anyị na-agwa gị na ị kwesịrị ịchekwaa edemede a n'etiti ọkacha mmasị gị ma ọ bụ buru ihe ederede ahụ, iji nweta ozi anyị ga-egosi gị ebe a.
1 Budata ngwa site na amaghi ama
2 Ichefu iji wụnye mmelite software
3 Jiri otu ma ọ bụ karịa antivirus
4 Mechie ngwa ma ọ bụ jiri Task Killers
5 Iji App cleaners, ọzọ rookie ndudue
6 Ejikwala ngwaọrụ anyị
7 Mkpebi kpamkpam
Budata ngwa site na amaghi ama
android Ọ na-abịa natively ahazi ka ọ bụla onye ọrụ wụnye ngwa na-adịghị ibudatara na Google Play ma ọ bụ ihe bụ otu ihe ahụ, ngwa ahịa. Ọ bụrụ na Google emeela mkpebi a, ị nwere ike iche na ọ bụ maka ihe. Agbanyeghị, onye ọrụ ọ bụla nwere ike n'ụzọ dị mfe ịgbanwe nhọrọ a, ma wụnye ngwa ọ bụla site na, dịka ọmụmaatụ, otu narị peeji web juputara na ngwa nke ụdị niile, dị njikere ibudata na ngwaọrụ anyị.
N'agbanyeghị ihe a niile, ọtụtụ ndị ọrụ na-etinye ngwa nke amaghị ama na ekwentị mkpanaaka ha ma ọ bụ mbadamba kwa ụbọchị, na-ekpughe onwe ha n'ihe egwu dị iche iche. O doro anya na nke a bụ mmejọ, dịkwa oke mkpa, nke onye ọ bụla na-ekwesịghị ịda.
Idealzọ kachasị mma ka ị ghara ịdaba na njehie a ga-abụ ịwụnye naanị ngwa ndị dị na Google Play, nke ọ dị mwute anaghị emesi anyị obi ike. Agbanyeghị, enwere ngwa, nke bara oke uru, enweghị maka nbudata na ụlọ ọrụ gọọmentị nke ngwa ọchụchọ. Ọ bụrụ na ịnweghị nhọrọ ọ bụla mana ịwụnye ngwa ndị dị na mpụga Google Play, mee ya nke ọma ma mara na ị na-ekpughere onwe gị n'ihe egwu dị egwu.
Ichefu iji wụnye mmelite software
Google na-agbalite oge niile Gam akporo OS mmelite, nke na-edozi ọtụtụ nsogbu ma ọ bụ dozie njehie ndị nwere ike ịpụta na ngwanrọ a ma ama. Itinyeghi ya putara na njehie na nsogbu ndia adighi na ngwa mobulu anyi ma obu na mbadamba.
Mmelite na-egosipụta dị ka ngosi mgbe ha dị na njehie nke ahụ Anyị ekwesịghị itinye aka na-eyigharị mmelite ndị a ruo mgbe ebighị ebi. Nkwado anyị bụ na ọ dịghị ihe karịrị ngwaọrụ anyị na-adọ anyị aka ná ntị na ụdị ọhụrụ nke sistemụ arụmọrụ gam akporo ma ọ bụ mmelite ọ bụla dị, arụnyere na ahapụghị ha maka oge ọzọ.
Site na mmelite nke ndị nrụpụta dị iche iche na - ebupụta, otu ihe ahụ ga - eme na ọ dị mkpa ka ị wụnye ha ozugbo ha dị ebe ha ga - eme ka ama anyị ma ọ bụ mbadamba rụọ ọrụ ka mma. Itinyeghị ha, dịka ọ na - eme na mmelite gam akporo, na - emehie dị mkpa na nke ahụ nwere ike ịpụta na ngwaọrụ anyị rapara na njehie nke nwere ike iwe iwe, dịka ọmụmaatụ, arụmọrụ nke ngwaọrụ anyị.
Jiri otu ma ọ bụ karịa antivirus
Daysbọchị ole na ole gara aga Anyị na-agwa gị n'isiokwu a na ọ dịghị mkpa ịwụnye, n'ọnọdụ ọ bụla, antivirus na ngwaọrụ anyị na sistemụ arụmọrụ gam akporo. ebe ọ bụ na ha bụ ngwa na-eri nnukwu akụ na batrị, na onyinye ha site na iwepu nje dị oke ụkọ.
Ma ọ bụ ya Nje virus na gam akporo na-agụ na mkpịsị aka otu aka, ebe ọ bụ na ọtụtụ n'ime ha zoro ezo n'ime ama ma ọ bụ mbadamba nkume anyị site na ngwa ndị na-enweghị mmalite. Dị ka nke a bụ mmeghe nke anyị na-agaghịzi eme ma ọ bụ na anyị ekwesịghị ime dị ka anyị hụburu na mbụ, ọ dịghị mkpa ịwụnye antivirus na ngwaọrụ anyị.
Ọ bụrụ na ịchọrọ ikwenye na ị gaghị etinye antivirus na ọdụ gị, lelee batrị nke ụdị ngwa ndị a yana lelee akụrụngwa ha na-eji. Typedị ngwa a na-arụ ọrụ oge niile, mgbe niile, na ndabere na mmefu ihe si na ya pụta, n'ihi nke ahụ anyị enweghị iji wụnye batrị ma ọ bụ RAM optimizers ma.
Mechie ngwa ma ọ bụ jiri Task Killers
Na ma nke a bụ njehie ma ọ bụ ihe bara uru maka ngwaọrụ mkpanaka anyị ma ọ bụ mbadamba, anyị nwere ike inwe mkparịta ụka ga-aga n'ihu ruo ọtụtụ awa. Ma ọ bụ na ọ bụ ezie na ọtụtụ na-eche na imechi ngwa ọ bụla anyị ji bụ ihe dị mma, ma ọ bụ mmechi a na aka ma ọ bụ na-akpaghị aka site na ndị a na-akpọ ndị na-egbu ọrụ, nke a ezighi ezi, ọbụlagodi n'echiche anyị na anyị ga-agwa ị nọ n'okpuru.
Sistemụ arụmọrụ oge ọ bụla anyị mepere ngwa, ọ na-etinye ya na ebe nchekwa RAM nke ngwaọrụ ahụ, nke mere na mgbe anyị mepere ya nke ugboro abụọ, ọ ga-emepe na nnukwu ọsọ. Imechi ya aka ma obu itughari na eme ka nke a ghara ime, ya mere ngwa a gha ewepu oge kwesiri iji meghe dika a ga-emeghe ya mbu. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na anyị bụ ndị ọrụ nke WhatsApp, gam akporo ga-echekwa ngwa ahụ na RAM nke mere na oge ọ bụla anyị mepere ya, ọ ga-emepe na oke ọsọ. Ọ bụrụ na anyị mechie ya, n'ụzọ ọ bụla, ọ ga-ewe ogologo oge iji mepee, ihe na-enweghị ihe ọ bụla na-enweghị onye ọ bụla nwere mmasị na ya.
Imechi ngwa bụ ihe na-bụ njehie, ma ọ bụrụ na ihe atụ na ngwa na-eji na ukwuu mgbe. Ọ bụrụ na ojiji nke ngwa a dịpụrụ adịpụ ma ọ bụ oge ụfọdụ, na-emechi ya, jiri aka ma ọ bụ site na Task Killer, nwere ike ịbụ ihe ịga nke ọma ebe ọ bụ na ọ baghị uru idebe ngwa "ndụ" na-enweghị anyị ga-eji ha na obere oghere nke oge.
Iji App cleaners, ọzọ rookie ndudue
La ebe nchekwa ọ na-enye ohere Filiks na-agba ọsọ na ndabere na-amalite ọtụtụ ihe ngwa ngwa, mgbe ikwe ka ngwa na-agba ọsọ na obere oge. Ihichapụ ebe nchekwa a, jiri ngwa ndị a maara dị ka ndị na-ehicha ngwa, bụ mmejọ rookie, naanị ihe ọ na-eme bụ nwayọ nwayọ, dịka ọmụmaatụ, mmeghe nke ngwa anyị na-ejikarị eme ihe.
Ọ bụghị ihie ụzọ na-ehichapụ ebe nchekwa ahụ site n'oge ruo n'oge, ebe ọ nwere ike ịchekwa ihe ndị na-abaghị uru, ma site na ebe ahụ iji kpochaa ya ọkara ọkara ọ bụla ekele maka ndị na-ehicha ngwa, enwere nnukwu ọdịiche.
Ọ bụrụ na nsogbu gị bụ enweghị oghere na ekwentị mkpanaaka gị ma ọ bụ mbadamba, hichapụ foto ma ọ bụ na-abaghị uru, ebe ọ bụ na n'ezie ị ga-ahapụ ọtụtụ ohere karịa na nke a ma si otú a mee ka oghere ahụ rụọ ọrụ dị ka ọ dị na mbụ, nke Ọ ga-aba ezigbo uru maka gị na ngwaọrụ gị.
Ejikwala ngwaọrụ anyị
Iji mechie ndepụta a anyị enweghị ike ichefu maka nke ọzọ njehie zuru oke, nke na-abụghị ihe ọzọ karịa ịmalitegharị ngwaọrụ anyị. N’oge na-adịghị anya, ọ fọrọ nke nta ka ndị ọrụ niile gbanyụọ ngwaọrụ mkpanaka anyị kwa abalị, dịka ọmụmaatụ, mana ruo oge ụfọdụ ugbu a, omume a tụrụ aro, anyị akwụsịla ime ihe dị iche iche.
Otú ọ dị, ịmalitegharia ngwaọrụ anyị na sistemụ arụmọrụ gam akporo nwere ike ịkwado nke ukwuu ka nke a na-ekpochapụ oghere, na-ewepu faịlụ niile na-adịru nwa oge echekwara na ya. Na mgbakwunye, ịmalitegharị nwere ike idozi ụfọdụ obere njehie na nhazi ntuziaka na obere nsogbu ndị ọzọ.
Ọ bụrụ na ịmalitegharịrị ngwaọrụ gị ogologo oge, mee ya ugbu a ma ị ga - ahụ otu ị ga - esi hụ mmelite ụfọdụ n'ọtụtụ akụkụ.
Ngwaọrụ na sistemụ arụmọrụ gam akporo na-enye ndị ọrụ nnukwu arụmọrụ ma sie ike nke ukwuu ịkụtu ma ọ bụ bibie, mana n’enweghị mgbagha ọ dị mkpa ịghara ihie ụzọ dị ka ndị anyị tụlere taa na n'elu ihe niile ghara imeghachi ha na oge.
Ọ bụrụ n ’ịmee mperi ọ bụla anyị tụlere n’isiokwu a kwa ụbọchị, mezie ha ugbu a ma gbalịa izere ha n’ọdịnihu, ka ngwaọrụ gị rụọ ọrụ zuru oke ma nwee ike ịnwụ afọ ole na ole.
Make nwere mmejọ ọ bụla nke anyị tụlere n’isiokwu a?. Gwa anyị ndị nọ n'ọhere edebere maka ikwu okwu na post a ma ọ bụ site na netwọkụ mmekọrịta ọ bụla anyị nọ na ya yana otu ị siri jisi ike ịkwụsị mmejọ ndị ahụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Mmehie isii ị na-eme, ma ghara ime ya, jiri ngwaọrụ gam akporo gị
Mmehie ọzọ ọ na-enwe bụ ịnwe ọrụ ndị na-enweghị isi, dịka GPS, nke na-eri ọtụtụ batrị. Ndụmọdụ m bụ iwepu ọrụ niile anyị achọghị.
M gụrụ mmejọ nke mmadụ na-eme dị mma. Agaghị m ebudata App dị iche iche
Ọ dị mma ịkwụ ya kwa abalị?
Ndụmọdụ ahụ dị mma. Ana m ekele gị.
Ezigbo ndụmọdụ iji zere mmejọ. Ana m ekwuputa na ufodu m mere n'ihi amaghi isi okwu a. Aga m agbali ịgbaso ndụmọdụ ndị a tụrụ aro. Daalụ.
Zaghachi Nuria María Vargas
Oma onyeadi dijo
Echere m na ọ bụ ihe ziri ezi ma dịkwa mma iji antivirus na android. Enwere ọtụtụ ozi gbasara ịdị mfe nke ịwụnye ha na ọ na-atụ ụjọ ịghara ịwụnye ya.
Zaghachi Omar Solano
Ahụrụ m isiokwu ikpeazụ gị n'anya, m ga-achọ ịma ma ị nwere ike ịkwado ngwa iji nwee ike ibudata vidiyo egwu na-enweghị nje tupu oge eruo na-ekele gị nke ukwuu